Fehin’ny Blaogy Any Azia Atsimo Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Fehin'ny Blaogy Any Azia Atsimo Atsinanana
Fehin'ny Blaogy Any Azia Atsimo Atsinanana tamin'ny Mey 2005.
Voadika ny 12 Avrily 2019 15:33 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Mey 2005)
Asongadin'i Steven McDermott avy ao amin'ny Singabloodypore ny fivoriam-bahoaka iray ho an'i Shanmugam Murugesu, Singaporeana iray nangataka famelan-tsazy amin'ny fanamelohana azy ho faty, izay nolavin'ny Filohan'i Singapaoro. Nanangona teo amin'ny fanehoankevitra 50 teo ilay lahatsoratry ny blaogy hatreto. Manoratra ihany koa izy mikasika ilay Singaporeana mpianatra iray izay noterena hanakatona ny blaoginy, norahonana hohenjehina noho ny fanalam-baraka.
Tena nitsikera mafy ny haino amanjery Maleziana nentim-paharazana ilay blaogera Jeff Ooi noho ny famadihany ny fanabeazana ho fitaovana politika amin'ny tsy antony, ary noho ny fametrahany Minisitra Maleziana iray teo amin'ny toerana tsy misy mpitsiriritra izay nanery azy hifanazava tamin'ny Praiminisitra. Toy izao ny olana amin'ity raharaha ity, araka ny asongadin'i Jeff,
Na izany aza, faranan'i theSun izany amin'ny fitenena fa nanana fikasàna tsara i Keng Yaik ary tokony ho raisina ho toy ny hetsiky ny tia tanindrazana ny fiteniny mahitsy.
Tsy misy olona madio fisainana tokony hitsipaka izany.
Nanintona ny sain'ireo mpaneho hevitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny lahatsoratr'i Jeff mikasika ireo firaketana ny lafitondron-jaza.
Mbola miady foana ny mba hifantohana kokoa amin'ireo olona sembana rehefa misy fitsoahana amin'ny loza ireo blaogera Maleziana. Nanintona ny sain'ny olona maneran-tany ilay tantara, miaraka aminà blaogy voalohany amin'ny teny Frantsay, Pointblog, gazetiboky mirakitra blaogy, izay manao azy io ho zava-dehibe anatin'ny fehin'ny blaogin-dry zareo.
Hatreto dia nampiasaina tanatinà blaogy Maleziana miisa 26 ilay sorabaventy, ary mitombo io isa io. Tohananà blaogy iray anà matihanina amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa izy io.
Nanasongadina olana iray mikasika ny lolompo mitombo manoloana ny fanondrotana ny mpiasam-panjakana iray efa misotro ronono ho amin'ny toeram-panjakana ambony indrindra ny StuffyMOH, blaogy mikasika ny Ministeran'ny Fahasalamana ao Malezia.
Indray andro, nisy blaogy iray nametra-panontaniana raha mora mihetsi-po na mampiseho fihetsika diso tafahoatra ireo olona misahotaka manoloana ilay vondrona rock Dewa naniratsira fivavahana (teo imason'ny Manda Mpiaro ny Finoana Silamo – FPI). Fanafoanana ny fahalalahana maneho hevitra ve izany, amin'ny lafiny zavakanto an-tsehatra. Ny fitsimbadiky ny tantara,
Mahaliana ny fivadihan'ny adihevitra rehefa milaza ireo ulama sasany, anatin'izany i Quraish Shihab sy i Gus Dur, fa tsy naniratsira fivavahana ilay vondrona. Taty aoriana, milaza ny Filankevitra Nasionalin'ny Ulama (MUI) izay miasa toy ny mpanelanelana anatin'ity raharaha ity, fa azo ekena ny mampiasa ny sorakaliana mivaky hoe “Allah” eo amin'ny sehatry ny varotra.